Imaam masaajid oo lagu dilay magaalada New York ee Maraykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldImaam masaajid oo lagu dilay magaalada New York ee Maraykanka
August 14, 2016 Puntland Mirror World 0
Imaamka la dilay, Maulana Akonjee.
New York-(Puntland Mirror) Iimaam Muslim ah iyo kaaliyihiisii ayaa lagu dilay magaalada New York ee dalka Maraykanka shalay galab oo Sabti ahayd.
Imaamka iyo kaaliyihiisa ayaa wada lugaynayay marka la dilay, sida ay sheegeen haayadaha amaanka Maraykanka.
Nin afka soo duubtay ayaa gadaal ka toogtay iimaamka iyo kaaliyihiisa, sida uu sheegay afhayeenka booliiska.
Booliiska ayaa sheegay in cidna aan wali loo xirin kiiskaas.
Imaamka la dilay ayaa la oran jiray Maulana Akonjee, wuxuuna jiray 55-sanno, sidoo kale kaaliyihiisa ayaa la oran jiray Thara Uddin, isna wuxuu jiray 64-sanno, labadooduba waxay xirnaayeen khamiisyo markii la tooganayay, sida ay booliiska sheegeen.
Ninka looga shaki qabo dilka ayaa waxaa arkay dad goobjoog ahaa isagoo qori gacanta ku wata oo ka cararaya goobta uu dilka ka dhacay.
September 11, 2016 Ugu yaraan 11 qof oo ku dhimatay dhul-gariir cabirkiisu ahaa 5.7 oo ku dhuftay dalka Tanzania